Shiinaha "T-bolt" oo ay weheliso Soosaarka iyo Warshadaha Gu'ga | Glorex
Waxaa sidoo kale lagu qalabeyn karaa guga-culus, oo la barbar dhigayo gu'ga caadiga ah, oo kufiican isku xirka tuubbada qalabka culus ee awooda badan.
Baakadaha caadiga ah waa bac bac ah, sanaadiiqda kartoon banaanka ah. Calaamadda ayaa ku taal sanduuqa.
T-bolt caadiga ah oo leh ciribta guga ayaa loo istcimaalaa isku xirida tuubbada tuubbada caarada ee mashiinka naaftada. Gu'ga-culus wuxuu ku habboon yahay barokac ballaaran oo gawaarida isboortiga iyo isku-xirida tuubbada matoorrada.
T-bolt with clamps guga waxay leeyihiin astaamaha xawaaraha deg degga ah, fududahay in la kala diro, iskudhafka lebiska, si aad ah ayaa loo isticmaali karaa oo si dabiici ah ayaa loo gaabin karaa iyada oo loo leexinayo tuubada tuubada si ay u gaadho saamaynta. Waxaa loogu talagalay buuqa daran iyo codsiyada dhexroor weyn oo caan ah gawaarida culus, mashiinada warshadaha, qalabka wadada ka baxsan, waraabka beeraha iyo mashiinada.
Hore: Ribbaadhista (hagaajinta xajiyeyaasha)